महन्थलाई मुस्किल छ « Lokpath
महन्थलाई मुस्किल छ
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएकोबारे निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर अझै बुझाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि जसपामा भाँडभैलो छ । यहि कारण जसपा प्राविधिक रुपमा नफुटेपनि व्यवहारिक रुपमा फुटिसकेको छ । ठाकुर कुनै पनि हालतमा ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहे भने यादव दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन (गत पुस ५ र जेठ ७) गरेर असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाइ कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने पक्षमा अडिग रहे ।
ठाकुर पक्ष ओलीलाई समर्थन गरेर जेठ २१ बाट सत्तामा गइसकेको छ । यादव पक्ष भने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छ ।
विपक्षी गठबन्धन प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग लिएर सर्वाेच्च अदालत गएको छ । ठाकुर पक्षले भने ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिदा जसपाभित्र धुव्रीकरण बढेको हो ।
पार्टीमा बिवाद चर्किदै गएपछि ठाकुर र यादवले एकले अर्कालाई जेठ १८ मा अनुशासनको कारवाही स्वरुप पार्टीबाट निष्काशन गरी आयोगमा पार्टीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
जेठ १९ मा आयोगले दुवै निवेदन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ (पहिलो संशोधन) अनुरुप नभएपछि बदर गर्दै अनुसूची १८ बमोजिमको फारमसमेत भरेर पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । अनुसूची १८ मा दलको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा उक्त ढाँचाअनुसार निर्वाचन आयोगमा लेखि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पत्रमा ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा ‘उपस्थित सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको माइन्यूटसमेत आयोगमा पेश गर्न’ भनेको थियो ।
यादवले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित ठाकुरलाई कारवाही गरिएको पत्र बुझाएका कारण उनलाई अनुसूची १८ को फारम मात्रै भर्न भन्यो । यादवले जेठ २० मै त्यो फारम भरेर बुझाइसकेका छन् । तर ठाकुर पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर बुझाउन सकेको छैन । बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकाले ठाकुर पक्षलाई बहुमत जुटाउन सकस भएको छ । आयोगले भने बमोजिम पत्र पेश गर्न नसकेपछि जेठ २३ मा ठाकुर पक्षले पार्टी सचिवालयका सबै जनालाई कोरोना भएको भन्दै आयोगसँग एक साताको समय माग गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार ठाकुर पक्षले मागेको एक साताको समय आगामी शुक्रवार सकिदैछ । कोरोनाका कारण देखाएर समय मागेकाले समय दिइएको हो । उनीहरुले मागेको समयभित्र बिवरण पेश गर्न नसकेमा आयोगले त्यसपछि नपर्खने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।
ठाकुर पक्षको रणनीति
जसपाको यादव पक्षले सम्पूर्ण विवरण आयोगमा बुझाइसकेको अवस्थामा ठाकुर पक्षलाई बहुमत जुटाउन समस्या भएको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । यादव पक्षमा रहेका सदस्यलाई सत्ताको लोभ देखाएर ठाकुर पक्ष आफ्नो बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा छ । त्यसका लागि सदस्यहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उदेश्यले ठाकुर पक्षले आयोगसँग समय मागेको यादव पक्षको आरोप छ ।
जसपाभित्र यादव पक्षका नेता गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार ठाकुर पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन बरु ठाकुर पक्षमा रहेका सदस्य पनि यादव पक्षमा आउन सक्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्,“ठाकुर पक्ष पार्टी हित विपरित गएको हुनाले उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कार्यकारिणी समितिका सदस्य एकजुट छन् । सत्ताको लोभ र डरधम्कीमा कोही पनि ठाकुरको पक्षमा जाँदैन ।”
गंगानारायण श्रेष्ठ, नेता जसपा
जेठ ४ मा यादव र ठाकुरबीच ओली सरकारमा सहभागी नबन्ने सहमति भएता पनि ठाकुर पक्ष भित्रभित्रै सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको थियो । ठाकुरले पार्टीलाई धोखा दिएको यादव पक्षको आरोप छ ।
उता ठाकुर पक्षका नेता डा.सुरेन्द्र झा भने आफूहरुको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने दाबी गर्छन् । झा भन्छन्, “निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा भित्रै बहुमत सदस्यहरुको समर्थन लिएर कागजात पेश गर्छाै,पार्टी सचिवालयका कर्मचारीलाई कोरोना भएका कारण बुझाउन केही ढिला भएको हो ।”
डा. सुरेन्द्र झा, नेता जसपा
केही नेताले भने दुवै पक्षमा हस्ताक्षर गरेनन् !
जसपा स्रोतका अनुसार नेताहरु राजकिशोर यादव, मनिष सुमन लगायतले पार्टी एक हुनुपर्ने भनेर यादव र ठाकुर दुवै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनीहरु आफ्नो समूहमा रहेको बुझाई ठाकुर पक्षको छ । तर उनीहरुले ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने बताइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टी सरकारमा जान नहुने धारणा उनीहरुले राख्दै आएका छन् ।
जसपाभित्रको दुई धार : पहिले छाँया अहिले घाम
एमालेमा ओली रणनीति : अप्ठ्यारोमा एकताको कुरा, सहज हुँदा कारबाही
एमाले विवादको फाइदा कांग्रेसलाई : कर्णाली प्रदेशबाट सत्तारोहण शुरु
प्रकाशित मिति: २०७८,जेष्ठ,२६,बुधबार १९:०७